(ကနေဒါ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 60°N 110°W﻿ / ﻿60°N 110°W﻿ / 60; -110
Inuktitut, Inuinnaqtun, Cree, Dëne Sųłiné, Gwich’in, en:Inuvialuktun, Slavey and Tłįchǫ Yatiì
ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ
၉,၉၈၄,၆၇၀ km2 (၃,၈၅၅,၁၀၀ sq mi) (အဆင့်: ဒုတိယ)
၁၁.၇၆ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ)
၉,၀၉၃,၅၀၇ km2 (၃,၅၁၁,၀၂၃ sq mi)
• Q1 2021 ခန့်မှန်း
၃၈,၁၃၁,၁၀၄  (အဆင့် - ၃၇)
၃.၉၂/km2 (၁၀.၂/sq mi) (အဆင့် - ၁၈၅)
$1.979 trillion (အဆင့် - ၁၅)
$၅၁,၇၁၃ (အဆင့် - ၂၀)
$1.883 trillion (အဆင့် - ၉)
$၄၉,၂၂၂ (အဆင့် - ၁၈)
အလွန်မြင့် · ၁၆
ကနေဒါ ဒေါ်လာ ($) (CAD)
ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြောက်အမေရိကတိုက် မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ ပြည်နယ် ၁၀ ခုနှင့် နယ်မြေ ၃ ခု ပါဝင်သော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ နှင့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာတို့မှတဆင့် မြောက်ဘက် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ အထိ ကျယ်ဝန်းပြီး စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၃.၈၅ သန်း (စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉.၉၈ သန်း) မျှ ကျယ်ဝန်းသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာအားဖြင့် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကုန်းမြေဧရိယာအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္တမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ နယ်စပ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ်မျဉ်း ဖြစ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ လည်း ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေအားဖြင့် ကြည့်လျှင် တကမ္ဘာလုံးတွင် အဆင့် ၁၁ ရှိပြီး လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်းအရ ကြည့်လျှင်မူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် ၈ ရှိသည်။ အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အရပ်ဖက် ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု၊ လူနေမှုဘဝ စံနှုန်း၊ စီးပွားရေး လွတ်လပ်မှု နှင့် ပညာရေးတို့တွင် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ ဖြင့် ထိပ်ဆုံး အဆင့်များတွင် ပါဝင်လျက် ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အဖွဲ့ နှင့် ဖရန်ကိုဖုန်းနီ အဖွဲ့ တို့တွင် ပါဝင်သည်။ ထို့ အပြင် အဓိက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များနှင့် အစိုးရ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် အစုဖွဲ့ထားသော အဖွဲ့အစည်း များ ဖြစ်သည့် နေတိုးအဖွဲ့၊ ဂျီအိတ်၊ ဆယ်နိုင်ငံအဖွဲ့၊ ဂျီတွမ်တီး၊ မြောက်အမေရိက လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အေးပက် ဖိုရမ်တို့တွင် ပါဝင်သည်။
၁၇၆၃ တော်ဝင်ကြေညာချက်ဖြင့် ကွီးဗက်ပြည်နယ် ကို နယူးဖရန့်မှ ခွဲထုတ် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘရက်တန် အိုင်းလန်း အငူ ကိုလည်း နိုဗာစကိုးရှား သို့ ပူးပေါင်း ထည့်သွင်းခဲ့သည်။  ယခု ပရင့်စ် အက်ဒ်ဝပ်ကျွန်း ဟု ခေါ်သော စိန့်ဂျွန်ကျွန်းသည် ၁၇၆၉ တွင် သီးသန့်ကိုလိုနီ နယ်မြေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ကွီးဗက် ရှိ ပဋိပက္ခများကို ရှောင်လွှဲရန် အတွက် ဗြိတိသျှ ပါလီမန်မှ ကွီးဗက်အက်ဥပဒေကို ၁၇၇၄ တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ကွီးဗက် နယ်မြေကို ဂရိတ်လိတ် နှင့် အိုဟိုင်းယိုး မြစ်ဝှမ်းအထိ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းမှ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ ကက်သလစ် ယုံကြည်မှုနှင့် ပြင်သစ် တရားမ ဥပဒေတို့ကို ပြန်လည် ပေါ်ထွန်းစေခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ၁၇၇၅ ခုနှစ် အမေရိကန် တော်လှန်ရေး မဖြစ်ပွားမီတွင် ကိုလိုနီ နယ်မြေ ၁၃ ခုရှိ နေထိုင်သူများအား ဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်များကို လောင်မြိုက်စေခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ကွန်ဖရင့်အချို့ ကျင်းပပြီးနောက် ၁၈၆၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အက်ဖြင့် ကနေဒါ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကို ၁၈၆၇ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်တွင် တည်ထောင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး အစပိုင်းတွင် အွန်တေရီအို၊ ကွီးဗက်၊ နိုဗာ စကိုးရှား နှင့် နယူးဘရန်းဝစ် ပြည်နယ် ၄ ခု ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကနေဒါမှ ရူးပတ်လန်း နှင့် အနောက်မြောက်ဒေသတို့ကို ထိန်းချုပ်ပြီး အနောက်မြောက်ဒေသများ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မဲတစ်တို့၏ မကျေနပ်မှုကြောင့် မြစ်နီသူပုန်ထမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ၁၈၇၀ ဇူလိုင်လတွင် မာနီတိုဘာ ပြည်နယ် ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။  ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ နှင့် ဗန်ကူးဗားကျွန်း တို့မှာ ၁၈၆၆ တွင် ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး ၁၈၇၁ တွင် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ ပရင့်စ်အက်ဒဝပ် ကျွန်းကမူ ၁၈၇၃ တွင် ပေါင်းစည်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း အက်ဥပဒေအရ ဗြိတိန်မှ ကနေဒါ၏ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ထိန်းချုပ်ထားဆဲ ဖြစ်သဖြင့် ၁၉၁၄ ခုနှစ် စစ်ကြေညာသည့် အခါတွင် ကနေဒါနိုင်ငံအား ပထမကမ္ဘာစစ် အတွင်းသို့ အလိုအလျောက် ပါဝင်စေခဲ့သည်။ ဆန္ဒအလျောက် စစ်ထဲသို့ ဝင်သူများအား အနောက်ဘက် စစ်မျက်နှာသို့ ပို့လွှတ်ခဲ့ပြီး နောင်တွင် ကနေဒါ တပ်မကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ကာ ၎င်းအဖွဲ့မှာ ဗိုင်မီတောင်ရိုး တိုက်ပွဲနှင့် အခြားသော အဓိက တိုက်ပွဲများတွင် အဓိက ကျသော နေရာမှ ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ် တွင် ပါဝင်သော ကနေဒါ စစ်သား ၆၂၅,၀၀၀ ဦးတွင် ၆၀,၀၀၀ ခန့်မှာ ကျဆုံးခဲ့ပြီး ၁၇၂,၀၀၀ ခန့်မှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။ ယူနီယံနစ်ပါတီ အစိုးရက စစ်တပ်၏ တစ်စထထက် တစ်စ လျော့နည်းလာသေသာ စစ်သည်အင်အားကို တိုးပွားလာစေရန် အတွက် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို တင်သွင်းရန် ကြိုးစားသည့် အခါတွင် ပြင်သစ်စကားပြော ကွီးဗက် နယ်သားတို့၏ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး ၁၉၁၇ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ စစ်မှုရေးရာ အက်ဥပဒေကြောင့် စစ်မှုမထမ်း မနေရ အခြေအနေကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ကွီးဗက်မြို့ ပြင်ပမှ ပြင်သစ်ဘာသာစကားပြော ကျောင်းများ ပြဿနာ နှင့် အခြားသူများနှင့် အလွန်အမင်း သီးသန့်ဖြစ်နေသော ပြင်သစ်စကားပြော ကနေဒါနိုင်ငံသားများ ပြဿနာများလည်း ပါဝင်ကြကာ လစ်ဘရယ် ပါတီကို ၂ ခြမ်းကွဲစေ ခဲ့သည်။ ၁၉၁၉ တွင် ကနေဒါသည် နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးသို့ ဗြိတိန်နှင့် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံ အနေနှင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၃၁ ခု ဝက်မင်စတာ စတက်ကျု ဥပဒေမှ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ခြင်းကို ထပ်ဆင့် အတည်ပြု ပေးခဲ့သည်။
၁၉၃၀ခုနှစ်များ၏ အစောပိုင်း ကနေဒါ စီးပွားပျက်ကပ်ကြီး အတွင်းတွင် ကနေဒါ၏ စီးပွားရေး ကျဆင်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် ခက်ခဲမှုများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုများကို တုံ့ပြန်သည့် အနေနှင့် ဆာစကက်ချဝမ်ရှိ ဓနသဟာယ သမဝါယမ ဖက်ဒရေးရှင်းမှ လူမှုဖူလုံရေးကို နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ယူသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေမည့် လိုအပ်ချက်များ ကို (တော်မီ ဒေါက်ဂလပ်စ်မှ စတင်ကာ) ၁၉၄၀ ခုနှစ်များနှင့် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များအတွင်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ လစ်ဘရယ် အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဝီလီယမ် လိုင်ယွန် မက်ကင်ဇီ ကင်း၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် ဆဌမမြောက် ဂျော့ခ်ဘုရင်မှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဂျာမနီကို ဗြိတိန်အပြီး ၇ ရက် အကြာတွင် စစ်ကြေညာခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ကနေဒါ စစ်တပ် ယူနစ်များသည် ၁၉၃၉ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိကြသည်။
စစ်အပြီး ကနေဒါ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် လစ်ဘရယ် အစိုးရ အဆက်ဆက်၏ ပေါ်လစီများကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံသားတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ အသစ်တစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကာ ၁၉၆၅ တွင် ယခု အသုံးပြုနေသော မေပယ်လ်ရွက် အလံကို စတင် အသုံးပြုခြင်း၊  ၁၉၆၉တွင် ရုံးသုံး ဘာသာစကား အဖြစ် အင်္ဂလိပ် နှင့် ပြင်သစ် ၂ ဘာသာကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊  ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ ရောနှောယှက်နွယ်နေသော ဝါဒကို ၁၉၇၁ တွင် တည်ထောင်ကျင့်သုံးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်လာကြသည်။ ဆိုရှယ် ဒီမိုကရေစီ ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ဖြစ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ကနေဒါ ပင်စင်စနစ်၊ ကျောင်းသားများအား ငွေချေးခြင်း ကိုလည်း ပြည်နယ်အစိုးရများ မှ တဆင့် တည်ထောင် ကျင့်သုံး လာခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကွီးဗက် နှင့် အယ်လ်ဘာတာ တို့မှ ၎င်းတို့၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်များ အတွင်းသို့ ထိုအစီအစဉ်များ ဝင်ရောက်လာခြင်းကို ကန့်ကွက် ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ညီလာခံများ အကြိမ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ၏ ရလဒ် အနေဖြင့် ၁၉၈၂ တွင် ကနေဒါ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့ပြီး အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်မှု ဆိုင်ရာ ပဋိဉာဏ် စာတမ်းကိုလည်း စတင် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ တွင် ဖက်ဒရယ် အစိုးရနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်းပြီးနောက် နူနာဗု သည် ကနေဒါ၏ တတိယမြောက် ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြောက်အမေရိကတိုက်ကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများကို နေရာယူထားပြီး တောင်ဘက်တွင် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ကုန်းမြေ နယ်စပ် ရှိကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အလက်စကာ ပြည်နယ် သည် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် အရှေ့ဘက်ရှိ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာမှ အနောက်ဘက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အထိ ဆန့်တန်း တည်ရှိနေကာ မြောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ ရှိသည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်မူ ဂရင်းလန်ကျွန်း တည်ရှိသည်။ ရေထု အပါအဝင် စုစုပေါင်း ဧရိယာ အားဖြင့် ကြည့်မည် ဆိုပါက ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကုန်းမြေဧရိယာ အနေဖြင့် ကြည့်မည် ဆိုပါက ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကွာခြားမှု ရှိရခြင်းမှာ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ရေကန် အမြောက်အမြား ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေကန်အားလုံး၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။  ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြောက်လတ္တီကျု ၄၁ ဒီဂရီ မှ ၈၄ ဒီဂရီကြား၊ အနောက် လောင်ဂျီကျု ၅၂ ဒီဂရီမှ ၁၄၁ ဒီဂရီ ကြားတွင် တည်ရှိသည်။
၁၉၂၅မှစ၍ ကနေဒါသည် အာတိတ်ဒေသ၏ အနောက် လတ္တီကျု ၆၀ ဒီဂရီ နှင့် အနောက် လောင်ဂျီကျု ၁၄၁ ဒီဂရီကြားကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေညာ ခဲ့သော်လည်း ထိုကြေညာချက်ကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ် မပြုပေ။ ကနေဒါသည် ကမ္ဘာ၏ မြောက်ဖျားစွန်းတွင် နေထိုင်သူများ ရှိရာ နေရာ ဖြစ်ပြီး အယ်လ်စမီးယားကျွန်း၏ မြောက်ဖျားပိုင်း မြောက်လတ္တီကျု ၈၂.၅ ဒီဂရီ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှ ၅၀၈မိုင် (၈၁၇ ကီလိုမီတာ) အကွာအဝေး တွင် ကနေဒါ စစ်တပ်၏ တပ်စခန်း တည်ရှိသည်။ ကနေဒါ၏ အာတိတ်ဒေသ နေရာ အများစုကို ရေခဲများ နှင့် အစဉ်အေးခဲနေသော နက်ရှိုင်းမြေလွှာ များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော ကမ်းရိုးတန်း ရှိရာ နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အရှည် ၁၂၅,၅၇၀ မိုင် (၂၀၂,၀၈၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှည်လျားသည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် နယ်နိမိတ်မှာလည်း ကမ္ဘာ့ အရှည်လျားဆုံးဖြစ်ပြီး ၅,၅၂၅မိုင်(၈,၈၉၁ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှည်လျားသည်။
အောက်လွှတ်တော် အမတ် ၃၀၈ ဦးအား မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုချင်းစီတွင် မဲအများဆုံးလူကို ရွေးချယ်သည်။ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘုရင်ခံချုပ်မှ ကျင်းပရန် ကြေညာပြီး ယခင် ရွေးကောက်ပွဲမှ ၄ နှစ် အတွင်း ဝန်ကြီးချုပ်၏ အကြံပေးချက်ကို ရယူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အောက်လွှတ်တော်တွင် အစိုးရအား အယုံအကြည်မရှိ မဲပေးခြင်း ခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပသည်။ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်၏ အမတ် ၁၀၅ ဦးကို ဒေသအလိုက် ခွဲတမ်းကျ ခန့်အပ်ပြီး အသက် ၇၅ နှစ် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖက်ဒရယ် ပါလီမန်သို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ ၎င်းတို့မှာ အာဏာရ ပါတီဖြစ်သော ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါတီ၊ တရားဝင် အတိုက်အခံ ပါတီ ဖြစ်သော နယူး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၊ ကနေဒါ လစ်ဘရယ် ပါတီ၊ ကီဗက်ကွာ အဖွဲ့ နှင့် ကနေဒါ ဂရင်းပါတီ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ပါလီမန်သို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသော သမိုင်းရှိသည့် ပါတီများ အများအပြားပင် ရှိသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် အစိုးရ၏ တာဝန်ကို ဖက်ဒရယ် အစိုးရနှင့် ပြည်နယ် ၁၀ ခု တို့အကြား ခွဲဝေထားသည်။ ပြည်နယ် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်တစ်ရပ်စီသာ ရှိပြီး အောက်လွှတ်တော်နှင့် လုပ်ကိုင်ပုံခြင်း တူညီသည်။ ကနေဒါ၏ ဒေသ ၃ ခုတွင်လည်း ဥပဒေပြု လွှတ်တော်များ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် အချုပ်အခြာ အာဏာ မရှိပဲ ပြည်နယ်များနှင့် ယှဉ်လျှင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှ ပေးအပ်ထားသော တာဝန် နည်းပါးသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များမှာလည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်များနှင့် ပုံစံချင်း ကွဲပြားသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ တရားရုံးများမှာ တရားဥပဒေကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်သော ပါလီမန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပယ်ဖျက်ခွင့် ရှိသည်။ ကနေဒါ တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် အမြင့်ဆုံး တရားရုံး နှင့် အဆုံးသတ် ဆုံးဖြတ်ပေးသူ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစ၍ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး တရားသူကြီးချုပ် ဘာဗလီ မက်လက်လင်း မှ ခေါင်းဆောင်လျက် ရှိသည်။ ထို တရားရုံးရှိ တရားသူကြီး ကိုးဦးကို ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် တရားရေး ဝန်ကြီးတို့၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် ဘုရင်ခံချုပ်မှ ခန့်အပ်သည်။ ပြည်နယ်/ဒေသ အဆင့် တရားရုံး နှင့် အယူခံ တရားရုံးများ၏ တရားသူကြီးများကို အစိုးရမဟုတ်သော တရားရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် တိုင်ပင်ခန့်အပ်သည်။ ဖက်ဒရယ် အစိုးရမှလည်း ပြည်နယ် နှင့် ဒေသ အဆင့် တရားရုံးများအတွက် တရားသူကြီးများကို ခန့်အပ်လေ့ ရှိသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက် ၃၆ ကြိမ်မြောက် ဂျီအိတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်၊ စတီဖင်ဟာပါး (ရှေ့) တို့ကို ဟာမန်းဗန် ရွန်ပိုင်း၊ ဒီမီထရီ မက်ဒ်ဗက်ဒဗ် နှင့် နာအိုတို ကန် တို့နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကနေဒါ၊ အီတလီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ နော်ဝေ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့မှ ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ကုန်ကျမည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ အတွက် ကာကွယ်ဆေးများ ဖော်ထုတ်ရန် ပရော့ဂျက်၌ ပူးပေါင်း ပံ့ပိုးမည်ဟု ကြေညာခဲ့ကြပြီး အခြားနိုင်ငံများကိုလည်း ၎င်းတို့နှင့် အတူ ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ရုရှားတို့၏ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသအတွင်း ရေအောက် စူးစမ်း ရှာဖွေမှုက အာတိတ်ဒေသအတွင်း ကနေဒါ၏ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ထားမှုကို စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ကနေဒါသည် ထိုဒေသအား ၎င်းတို့၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် ဒေသအဖြစ် ၁၉၂၅ ခုနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှ အောက်တိုဘာလ အတွင်းတွင် ကနေဒါတပ်ဖွဲ့များသည် ကုလသမ္မဂ္ဂမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ချက်အရ လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ် အတွင်း ပါဝင် ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ကနေဒါ မြေပြင်နှင့် ဝေဟင်တပ်တို့သည်အီရတ်နိုင်ငံ အတွင်း အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ ၏ ထကြွမှုကို နှိမ်နှင်းရာတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များနှင့် အတူ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကနေဒါသည် နိုင်ငံတကာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမှုများတွင် ပါဝင်နေမှုတို့အတွက် အင်အား အလယ်အလတ်ရှိ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ကုလသမ္မဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂျီ၂၀ နှင့် စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ တို့တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်နေရုံမျှသာမက ကနေဒါနိုင်ငံသည် အခြားသော စီးပွားရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖိုရမ်များတွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်လျက် ရှိသည်။ ကနေဒါသည် ၁၉၇၆တွင် အများပြည်သူ့ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ပဋိဉာဏ်စာချုပ်အား လက်ခံသဘောတူ ခဲ့သည်။
၂၀ ရာစု အစောပိုင်းမှ စ၍ ကနေဒါ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သတ္တုလုပ်ငန်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု များကြောင့် နိုင်ငံအား ကျေးလက်အခြေခံ စီးပွားရေး စနစ်မှ မြို့ပြအခြေခံ ကုန်ထုတ်လုပ်ရာ စီးပွားရေး စနစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများ နည်းတူပင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတွင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းသည် အဓိက ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်သမား ၄ ပုံ ၃ ပုံသည် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများနှင့် ကနေဒါတို့၏ ကွဲပြားခြားနားချက်မှာ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အခြေခံစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွင် သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ရေနံလုပ်ငန်းတို့သည် ထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် ပါဝင်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကနေဒါသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများထဲမှ စွမ်းအင်ကို တင်ပို့ရောင်းချမှု တင်သွင်းမှုထက်များသော နိုင်ငံ အနည်းငယ်တွင် ပါဝင်သည်။ အတ္တလန္တိတ် ကနေဒါ အပိုင်းတွင် ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ မြောက်များစွာ ရှိပြီး အယ်လ်ဘာတာတွင်လည်း ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ် အမြောက်အမြား ရှိသည်။ အာသာဘာစကာ ရေနံမြေ၏ ကျယ်ပြန့်မှုနှင့် အခြား ရေနံထွက်ရှိရာ ဒေသများကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမျှသော ရေနံ ရှိရာ နေရာ ဖြစ်ပြီး ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတို့ ပြီးလျှင် တတိယမြောက် အများဆုံး ရေနံထွက်ရှိရာ ဒေသဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်ကုန် အများဆုံး ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ကနေဒါ ပရေရီမြက်ခင်းပြင်ဒေသသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး အတွက် အရေးပါသော ဂျုံ၊ ကနိုလာ နှင့် အခြားနှံထွက် ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရာ ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာနမှ အဓိက ပို့ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သော စာရင်းဇယားကို ဖော်ပြရာတွင် ကနေဒါသည် ဇင့်၊ ယူရေနီယမ်၊ ရွှေ၊ နစ်ကယ်၊ အလူမီနီယမ်၊ စတီးလ်၊ သံရိုင်း၊ ကုတ် မီးသွေး နှင့် ခဲ တို့ကို တင်ပို့ရာတွင် ထိပ်တန်းမှ ပါဝင်သည်။ ကနေဒါမြောက်ပိုင်းရှိ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ပြုလုပ်ရန် ခဲယဉ်းသော ဒေသများတွင် အနီးအနားတွင် သတ္တုတွင်းများနှင့် သစ်ထုတ်လုပ်ရာ နေရာများ ရှိသောကြောင့် အသက်ရှင် ရပ်တည်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ အွန်တေရီယို တောင်ပိုင်းနှင့် ကွီးဗက်တို့တွင် အတော်အတန် ကြီးမားသော ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ရှိပြီး လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ နှင့် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ အရေးပါသော ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍများ ဖြစ်သည်။
ကနေဒါ အာကာသ အေဂျင်စီမှာ အလွန်တက်ကြွသော အာကာသ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး နက်ရှိုင်းသော အာကာသအတွင်းပိုင်း သုတေသန၊ ဂြိုဟ်များဆိုင်ရာ သုတေသန နှင့် လေကြောင်းသွားလာရေး ဆိုင်ရာ သုတေသန များကို ပြုလုပ်လျက် ရှိကာ ရော့ကက်များ နှင့် ဂြိုဟ်တုများကို တီထွင် ထုတ်လုပ်လျက် ရှိသည်။ ကနေဒါသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာလွက် ၁ ဂြိုဟ်တု လွှတ်ထုတ်မှုကြောင့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့ပြီးလျှင် တတိယမြောက် ဂြိုဟ်တု ထုတ်လွှတ်နိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် မာ့ခ် ဂါနိုးသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အာကာသ အတွင်း သွားလာသူ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထိ လူလိုက်ပါသော အာကာသ အစီအစဉ် ၁၇ ခုနတွင် ကနေဒါနိုင်ငံသား ကိုးဦး အာကာသ အတွင်း ခရီးသွားလာခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ စာရင်းအရ ကနေဒါနိုင်ငံသားများ၏ မိမိကိုယ်တိုင် ဖြည့်သွင်းသော လူမျိုးရင်းများတွင် အများဆုံးမှာ ကနေဒီယန် ဖြစ်ပြီး (လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း) ၎င်း၏ နောက်တွင် အင်္ဂလိပ် လူမျိုး (၂၁%)၊ ပြင်သစ် ( ၁၅.၈%)၊ စကော့လူမျိုး ( ၁၅.၁%)၊ အိုင်းရစ်ရှ် (၁၃.၉%)၊ ဂျာမန် (၁၀.၂%)၊ အီတလီ (၄.၆%)၊ တရုတ် (၄.၃%)၊ ဖတ်စ်နေးရှင်း (၄.၀%)၊ ယူကရိန်း (၃.၉%) နှင့် ဒတ်ချ် ( ၃.၃%) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အသိအမှတ် ပြုထားသော ဖတ်စ်နေးရှင်း အုပ်စိုးသူ နှင့် လူမျိုးစု ပေါင်း ၆၀၀ ခန့် ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁,၁၇၂,၇၉၀ ဦး ခန့် ရှိသည်။ 
၂၀၀၆ တွင် ကနေဒါရှိ ရှေးဦးနေထိုင်သူများ၏ လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်းမှာ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံး တိုးပွားနှုန်း၏ နှစ်ဆခန့်မျှ ရှိပြီး ကနေဒါနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သည် ရှေးဦးနေထိုင်သူ အဖြစ် မိမိတို့ဘာသာ ခံယူကြသည်။ လူဦးရေ၏ အခြားသော ၁၆.၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရှေးဦးနေထိုင်သူ မဟုတ်သော အခြားသော လူနည်းစု လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သိသာထင်ရှားသော လူနည်းစု လူမျိုး များမှာ တောင်အာရှသား (၄.၀%)၊ တရုတ် (၃.၉%) နှင့် လူမည်း (၂.၅%) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၁ မှ ၂၀၀၆ ကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော လူနည်းစု လူမျိုးများ၏ လူဦးရေမှာ ၂၇.၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် အခါက လူနည်းစု လူမျိုးများမှာ ကနေဒါ လူဦးရေ ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်း အောက် ( ၃၀၀,၀၀၀ သိန်းခန့်) သာ ရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်သို့ ရောက်သော အခါ ၅ ယောက်တွင် ၁ ယောက် (၁၉.၈%) မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် မွေးဖွားသူများ ဖြစ်ကြပြီး အသစ်ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်လာသူ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အာရှမှ ဖြစ်ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း မှလည်း ပါဝင်သည်။ ကနေဒါသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူများ၏ အဓိက ရင်းမြစ်နိုင်ငံများမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကနေဒါ စာရင်းဇယား ဌာန၏ အဆို အရ သိသာသော လူနည်းစု လူမျိုးစုများသည် ၂၀၃၁ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံမျှ ဖြစ်လာနိုင်သည် ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဘာသာတရား မျိုးစုံရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာများ အများအပြားပင် ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်း အရ ကနေဒါနိုင်ငံသားတို့၏ ၆၇ % မှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ပြီး ရိုမန်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်များမှာ ၃၈.၇% အထိ ရှိပြီး အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ပရိုတက်စတင့် ခရစ်ယာန်များတွင် ယူနိုက်တက် ကနေဒါ ဘုရားကျောင်း အသင်းတော်တွင် ၆.၁ % ရှိပြီး အန်ဂလီကန် တွင် ၅.၀% ရှိကာ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များမှာ ၁.၉% ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ၂၃.၉% မှာ ဘာသာမဲ အဖြစ် ကြေညာကြပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ဘာသာမဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၁၆.၅% သာ ရှိသည်။ ကျန်ရှိသော ၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော ဘာသာများကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ၃.၂%၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၁.၅% ပါဝင်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသား အများစုမှာ ဘာသာတရားသည် ၎င်းတို့ ရှင်သန်လှုပ်ရှား နေထိုင်ကြသော နေ့စဉ်ဘဝ၏ အရေးကြီးသော နေရာတွင် မပါဝင်ဟု ယူဆကြသော်လည်း ဘုရားသခင်ကိုမူ ယုံကြည်ကြသည်။ ဘာသာတရား ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း နှင့် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စသာလျှင် ဖြစ်သည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆကြသည်။ ကနေဒါတွင် တရားဝင် နိုင်ငံတော် ဘုရားကျောင်းဟူ၍ မရှိဘဲ အစိုးရက လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်မှု ကို တရားဝင် အားပေးသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ကနေဒါ လူဦးရေ စာရင်းအရ ကနေဒါနိုင်ငံသား ၆.၈ သန်းတို့သည် ရုံးသုံးဘာသာစကား မဟုတ်သော ဘာသာစကားကို ၎င်းတို့၏ မိခင်ဘာသာစကား အဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကား မဟုတ်သော ဘာသာစကားများထဲမှ ပထမဘာသာ အဖြစ် အသုံးပြုကြသော ဘာသာစကားများမှာ တရုတ် (အဓိကအားဖြင့် ကန်တုံဘာသာ၊ ပြောဆိုသူ ၁,၀၇၂,၅၅၅ ဦး)၊ ပန်ချာပီ ဘာသာ (၄၃၀,၇၀၅ ဦး)၊ စပိန်ဘာသာ (၄၁၀,၆၇၀ဦး))၊ ဂျာမန်ဘာသာ (၄၀၉,၂၀၀ ဦး) နှင့် အီတလီဘာသာ (၄၀၇,၄၉၀ ဦး) တို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ ကနေဒါယဉ်ကျေးမှုသည် ဗြိတိသျှ၊ ပြင်သစ် နှင့် ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရသည်။ ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာစကား၊ အနုပညာ နှင့် ဂီတ တို့မှ တစ်ဆင့် ကနေဒါ၏ ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာကို ဆက်လက် လွှမ်းမိုးနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသား အများစုမှာ ယဉ်ကျေးမှုများ ရောနှောယှက်နွယ်နေသည်ကို တန်ဖိုးထားကြပြီး ကနေဒါနိုင်ငံအား နဂိုမူလကတည်းက ယဉ်ကျေးမှုများ ရောနှောယှက်နွယ်နေရာ နေရာ အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ အမေရိကန်မှ မီဒီယာနှင့် ဖျော်ဖြေရေးတို့မှာ အင်္ဂလိပ် စကားပြောသော ကနေဒါ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အဓိက နေရာ မရှိလျှင်ပင် လူကြိုက်များသည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ အလားတူပင် ကနေဒါမှ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖျော်ဖြေရေးသမားတို့မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် အောင်မြင်ကြသည်။ ကနေဒါ၏ ထင်ရှားသော ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များ၊ ဥပဒေများ အပြင် ကနေဒါ အသံလွှင့်ဌာန(CBC)၊ ကနေဒါ အမျိုးသား ရုပ်ရှင် ဘုတ်အဖွဲ့(NFB) နှင့် ကနေဒါ ရေဒီယို၊ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကော်မရှင် (CRTC) အစရှိသော အဖွဲ့အစည်းများက ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အားကစား လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းမှာ ၁၇၇၀ ခုနှစ်များမှ စတင်ခဲ့သည်။ ကနေဒါ၏တရားဝင် နိုင်ငံတော် အားကစားနည်းများမှာ ရေခဲပြင် ဟော်ကီ ကစားနည်းနှင့် လာခရော့စ် ကစားနည်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကနေဒါ၏ မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသကြီး ရှစ်ခုထဲမှ ခုနစ်ခု ဖြစ်သော တိုရွန်တို၊ မွန်းထရီအော၊ ဗန်ကူးဗား၊ အော့တဝ၊ ကယ်လ်ဂရီ၊ အက်ဒမန်တန် နှင့် ဝင်နီပက် တို့တွင် နေရှင်နယ် ဟော်ကီ လိခ် ၏ အသင်းများ အသီးသီး ရှိကြပြီး ကွီဗက်မြို့တွင် ကွီဗက်နော်ဒစ် ဟူသော ဟော်ကီအသင်း ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ တွင် ကော်လိုရာဒိုသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ အခြား လူကြည့်များသော အားကစားနည်းများမှာ ရေခဲပြင်တွင် ဒိုးပစ် ကစားရသော ကားလင်း အားကစားနည်း နှင့် ကနေဒါ ဘောလုံး ကစားနည်းတို့ ဖြစ်ကာ ကနေဒါ ဘောလုံးကို ကနေဒါ ဘောလုံး လိခ်တွင် ကြေးစား ကစားကြသည်။ ဂေါက်သီး၊ တင်းနစ်၊ ဘေ့စ်ဘောလ်၊ စကီး၊ ခရစ်ကက်၊ ဘော်လီဘော၊ ရက်ဂ်ဘီ ယူနီယံ၊ ဘောလုံး နှင့် ဘက်စကက်ဘော ကစားနည်းတို့ကို လူငယ်များ နှင့် အပျော်တမ်းကစားရာတွင် အများအပြား ကစားကြသော်လည်း ကြေးစားပြိုင်ပွဲများနှင့် ကလပ်အသင်းများမှာ များများစားစား မရှိပေ။ သို့သော်လည်း ကနေဒါတွင် ကြေးစား ဘေ့စ်ဘော အသင်း တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ်၊ ကြေးစား ဘတ်စကက်ဘော အသင်း တိုရွန်တို ရက်ပ်တာ နှင့် အဓိက ဘောလုံးကလပ် ၃ ခု ဖြစ်သော တိုရွန်တို အက်ဖ်စီ၊ ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကပ် အက်ဖ်စီ နှင့် မွန်းထရီအော အင်ပက် တို့ ရှိသည်။ ကနေဒါသည် ၁၉၀၀ ခုနှစ် အိုလံပစ် ကစားပွဲ စတင်သည့် အချိန်မှစ၍ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတိုင်း လိုလို တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် အားကစားပွဲများ ဖြစ်သော ၁၉၇၆ နွေရာသီ အိုလံပစ်ကို မွန်းထရီအော မြို့တွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၈ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ကစားပွဲကို ကယ်လ်ဂရီမြို့တွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၄ ကမ္ဘာ့ ဘက်စကက်ဘော ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၀၇ အသက် ၂၀ အောက် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ နှင့် ၂၀၁၀ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတို့ကို ဗန်ကူးဗား မြို့ နှင့် ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာရှိ ဝစ်စလာ တို့တွင်လည်းကောင်း အိမ်ရှင်အဖြစ် အသီးသီး လက်ခံ ကျင်းပခဲ့သည်။
ကနေဒါ၏ နိုင်ငံတော် ပြယုဂ် သည် သဘာဝ၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်သည်။ မေပယ်လ်ရွက်ကို ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပြယုဂ် အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းမှာ ၁၈ ရာစု အစောပိုင်းမှ စတင်ခဲ့သည်။ မေပယ်လ်ရွက်ကို ယခု လက်ရှိနှင့် ယခင် ကနေဒါ အလံတို့ အပြင် ကနေဒါ၏ အမှတ်တံဆိပ် တို့တွင် အသုံးပြု ထားသည်။ အခြား ထင်ရှားသော ပြယုဂ်များမှာ ဘီဗာဖျံ၊ ကနေဒါ ငန်း၊ ရေဝမ်းဘဲ၊ သရဖူ၊ တော်ဝင် ကနေဒါ မြင်းစီး ပုလိပ် နှင့် လတ်တလောတွင် တိုတန်ပိုးလ် ခေါ် ကိုယ်စားပြု အရုပ်များ ချယ်သထားရာ တိုင် နှင့် အိနွတ်ဆွတ် ရုပ်တုတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကနေဒါ နိုင်ငံသုံး ငွေအကြွေစေ့များတွင် ထို အမှတ်အသားများကို ရိုက်နှိပ်ထားပြီး တစ်ဒေါ်လာ အကြွေစေ့တွင် ရေဝမ်းဘဲ ပုံကို လည်းကောင်း၊ ၅၀ ဆင့် အကြွေစေ့တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို လည်းကောင်း၊ နစ်ကယ် အကြွေစေ့တွင် ဘီဗာဖျံ ပုံကို လည်းကောင်းရိုက်နှိပ်ထားပြီး မေပယ်လ်ရွက်ပုံ ရိုက်နှိပ်ထားသော ပဲနိစေ့ကို ၂၀၁၃ တွင် သုံးစွဲခြင်းမှ ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
↑ Royal Anthem။ Government of Canada (August 11, 2017)။
↑ Official Languages Act (PDF)။ Revised Statutes of NWT, 1988။ Department of Justice, Northwest Territories။ 2009-11-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ Dowding၊ Keith; Dumont၊ Patrick (2014)။ The Selection of Ministers around the World။ Taylor & Francis။ p. 395။ ISBN 978-1-317-63444-7။
↑ D'Aquino၊ Thomas (1983)။ Parliamentary democracy in Canada: issues for reform။ ITP Nelson။ pp. 2။ ISBN 0458962902။ Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (အကူအညီ)
↑ Government of Canada၊ Statistics Canada (June 17, 2021)။ The Daily — Canada's population estimates, first quarter 2021။
↑ Population size and growth in Canada: Key results from the 2016 Census။ Statistics Canada (February 8, 2017)။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ World Economic Outlook Database။ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (April 2021)။
↑ Income inequality။ OECD။
↑ Human Development Report 2020 (in en)။ United Nations Development Programme (2020)။
↑ The Government of Canada and Standards Council of Canada prescribe ISO 8601 as the country's official all-numeric date format: Public Works and Government Services Canada Translation Bureau (1997)။ "5.14: Dates"။ The Canadian style: A guide to writing and editing (Revised ed.)။ Dundurn Press။ p. 97။ ISBN 978-1-55002-276-6။ The dd/mm/yy and mm/dd/yy formats also remain in common use; see Date and time notation in Canada.
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ ၁၃.၂ Alan Rayburn (2001)။ Naming Canada: Stories about Canadian Place Names။ University of Toronto Press။ pp. 14–22။ ISBN 978-0-8020-8293-0။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ ၁၇.၂ ၁၇.၃ Buckner, Philip, ed. (2008)။ Canada and the British Empire။ Oxford University Press။ pp. 37–40, 56–59, 114, 124–125။ ISBN 978-0-19-927164-1။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Christoph Beat Graber; Karolina Kuprecht; Jessica C. Lai (2012)။ International Trade in Indigenous Cultural Heritage: Legal and Policy Issues။ Edward Elgar Publishing။ p. 366။ ISBN 978-0-85793-831-2။
↑ Thomas D. Dillehay (2008)။ The Settlement of the Americas: A New Prehistory။ Basic Books။ p. 61။ ISBN 978-0-7867-2543-4။ 25 March 2015 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၇.၀ ၂၇.၁ ၂၇.၂ Wilson၊ Donna M; Northcott, Herbert C (2008)။ Dying and Death in Canada။ University of Toronto Press။ pp. 25–27။ ISBN 978-1-55111-873-4။
↑ ၂၈.၀ ၂၈.၁ Thornton၊ Russell (2000)။ "Population history of Native North Americans"။ in Haines, Michael R; Steckel, Richard Hall (eds.)။ A population history of North America။ Cambridge University Press။ pp. 13, 380။ ISBN 978-0-521-49666-7။ Cite uses deprecated parameter |editors= (အကူအညီ)
↑ ၃၇.၀ ၃၇.၁ Hornsby၊ Stephen J (2005)။ British Atlantic, American frontier: spaces of power in early modern British America။ University Press of New England။ pp. 14, 18–19, 22–23။ ISBN 978-1-58465-427-8။
↑ ၅၅.၀ ၅၅.၁ Bothwell၊ Robert (1996)။ History of Canada Since 1867။ Michigan State University Press။ pp. 31, 207–310။ ISBN 978-0-87013-399-2။
↑ Sir John A. Macdonald။ Library and Archives Canada (2008)။ 14 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၁.၀ ၆၁.၁ ၆၁.၂ ၆၁.၃ ၆၁.၄ Morton၊ Desmond (1999)။ A military history of Canada (4th ed.)။ McClelland & Stewart။ pp. 130–158, 173, 203–233, 258။ ISBN 978-0-7710-6514-9။
↑ ၆၃.၀ ၆၃.၁ McGonigal၊ Richard Morton (1962)။ The Conscription Crisis in Quebec – 1917:aStudy in Canadian Dualism။ Harvard University။ p. Intro။
↑ ၆၈.၀ ၆၈.၁ Goddard၊ Lance (2005)။ Canada and the Liberation of the Netherlands။ Dundurn Press။ pp. 225–232။ ISBN 978-1-55002-547-7။
↑ ၇၅.၀ ၇၅.၁ Bickerton, James; Gagnon, Alain, ed. (2004)။ Canadian Politics (4th ed.)။ Broadview Press။ pp. 250–254, 344–347။ ISBN 978-1-55111-595-5။ CS1 maint: multiple names: editors list (link)
↑ ၇၈.၀ ၇၈.၁ Sorens, J (December 2004). "Globalization, secessionism, and autonomy". Electoral Studies 23 (4): 727–752. doi:10.1016/j.electstud.2003.10.003.
↑ Leblanc၊ Daniel။ "A brief history of the Bloc Québécois"၊ August 13, 2010။ November 25, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 September 2010။
↑ Canada Recession: Global Recovery Still Fragile3Years On။ Huffington Post (July 22, 2012)။ 25 August 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 1, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၂.၀ ၉၂.၁ Canada exchanges fire with Islamic State in Iraq။ BBC (January 19, 2015)။ February 9, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၃.၀ ၉၃.၁ ၉၃.၂ ၉၃.၃ Canada။ World Factbook။ CIA (May 16, 2006)။ 30 April 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၇.၀ ၁၀၇.၁ MacLeod၊ Kevin S (2012)။ A Crown of Maples (PDF) (2nd ed.)။ Queen's Printer for Canada။ p. 16။ ISBN 978-0-662-46012-1။ 10 November 2012 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ ၁၁၀.၀ ၁၁၀.၁ ၁၁၀.၂ Forsey၊ Eugene (2005)။ How Canadians Govern Themselves (PDF) (6th ed.)။ Queen's Printer။ pp. 1, 16, 26။ ISBN 978-0-662-39689-5။ 15 January 2011 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁၁.၀ ၁၁၁.၁ Marleau၊ Robert။ House of Commons Procedure and Practice: Parliamentary Institutions။ Queen's Printer။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂၁.၀ ၁၂၁.၁ ၁၂၁.၂ Patterson, Lisa Lynne (2004). "Aboriginal roundtable on Kelowna Accord: Aboriginal policy negotiations 2004–2006". Parliamentary Information and Research Service, Library of Parliament. Retrieved on October 23, 2014.
↑ Vagnoni၊ Giselda။ "Rich nations to sign $1.5 bln vaccine pact in Italy"၊ Reuters၊ February 5, 2007။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 August 2011။
↑ International Covenant on Civil and Political Rights။ United Nations (2014)။ 1 September 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 3, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Index of Economic Freedom။ Heritage Foundation/Wall Street Journal (2013)။ 29 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 27, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jonathan Kay: The key to Canada's economic advantage over the United States? Less income inequality။ National Post (December 13, 2012)။ December 14, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ ၁၅၇.၀ ၁၅၇.၁ Canada။ OECD Better Life Index။ OECD (2014)။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၄.၀ ၁၆၄.၁ Brown၊ Charles E (2002)။ World energy resources။ Springer။ pp. 323, 378–389။ ISBN 978-3-540-42634-9။
↑ ၁၆၆.၀ ၁၆၆.၁ Britton၊ John NH (1996)။ Canada and the Global Economy: The Geography of Structural and Technological Change။ McGill-Queen's University Press။ pp. 26–27, 155–163။ ISBN 978-0-7735-1356-3။
↑ Latest release from Labour Force Survey။ Statistics Canada (November 6, 2009)။ 21 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၈၈.၀ ၁၈၈.၁ Rockefeller University scientist Ralph Steinman, honored today with Nobel Prize for discovery of dendritic cells, dies at 68။ Rockefeller University (October 3, 2011)။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Martel၊ Laurent (September 22, 2009)။ 2006 Census: Portrait of the Canadian Population in 2006, by Age and Sex။ Statistics Canada။ 20 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 18, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Overview of Education in Canada။ Council of Ministers of Education, Canada။5January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 20, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ethnocultural Portrait of Canada – Data table။ Statistics Canada (July 28, 2009)။ 11 December 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aboriginal Identity (8), Sex (3) and Age Groups (12) for the Population of Canada, Provinces, Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 2006 Census – 20% Sample Data။ 2006 Census: Topic-based tabulations။ Statistics Canada (June 12, 2008)။ 18 October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 18, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၃၃.၀ ၂၃၃.၁ 2006 Census: The Evolving Linguistic Portrait, 2006 Census: Highlights။ Statistics Canada, Dated 2006။ October 12, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'O Canada'။ Historica-Dominion။7November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ November 27, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၆၁.၀ ၂၆၁.၁ Canadian Heritage (2002)။ Symbols of Canada။ Canadian Government Publishing။ ISBN 978-0-660-18615-3။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကနေဒါနိုင်ငံ&oldid=740458" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၁:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။